မျက်မှောက်ခေတ်ရဲ့ မြနန္ဒာတို့အကြောင်း - For her Myanmar
တစ်ခေတ်တစ်ခါက အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝကို မြနန္ဒာ နဲ့ ထင်ဟပ်စေခဲ့တာ ဆရာမ ကြည်အေးရဲ့ အနုပညာပါ
ဆရာမကြီး ကြည်အေးရေးဖူးတဲ့ “မောင် ကိုကို နဲ့ မြနန္ဒာ” ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို ဖတ်ဖူးသူတွေ၊ မဖတ်ဖူးသူတွေ ရှိကြပါမယ်။ ဒီဆောင်းပါးက ဒီစာအုပ်အကြောင်း အဓိက ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဆရာမကြီးကြည်အေး ဖော်ပြခဲ့တဲ့ တစ်ခေတ်က အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဘဝအကြောင်းကိုပါ။
ဇာတ်လမ်း ရဲ့ အဓိက အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့ မြနန္ဒာ ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အထက်တန်းလွှာအသိုင်းအဝိုင်းမှာ မွေးဖွားလာသူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြနန္ဒာဟာ လုံလောက်တဲ့ ပညာသင်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မလိုအပ်ဘူးလို့ သူ့မိဘတွေက ယူဆခဲ့ကြလို့ပါ။ မြနန္ဒာ ငယ်စဉ်ကတည်းက ဆွေမျိုးနီးစပ်တော်တဲ့ ကိုကို နဲ့ လက်ထပ်ပေးဖို့ မြနန္ဒာရဲ့ အဖေက ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အတိုင်း မြနန္ဒာရဲ့ ဖခင်က ကိုကို့ကို အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ ဆရာဝန်ဖြစ်သည်အထိ ပညာသင်ဖို့ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ မြနန္ဒာ ကိုတော့ ပညာတတ်တယ် ဆိုရုံတင် အထက်တန်းကျောင်းအထိသာ ပညာသင်ပေးဖို့ ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း မြနန္ဒာက တောင်းဆိုလွန်းလို့သာ တက္ကသိုလ် တက်ခွင့်ပေးခဲ့တာပါ။
Related Article >>>> မသိမမီလိုက်တဲ့ခေတ်က အမျိုးသမီးတွေအပေါ် ခွဲခြားထားခဲ့တဲ့ ဓလေ့များ
အချိန်တန်တော့လည်း မြနန္ဒာကို ကိုကို နဲ့ လက်ထပ်စေခဲ့ပြီး မြနန္ဒာ ဇနီးကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ရပြန်ပါတယ်။ ကိုကို အပြင်မှာ ခြေရှုပ်တော့လည်း ကိုကို ဘာပဲဖြစ်နေနေ မြနန္ဒာဟာ ဇနီးကောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပြုစုယုယရမယ် ဆိုတဲ့ အသိကိုပဲ မြနန္ဒာရဲ့ မိဘတွေက သွင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ မြနန္ဒာဟာ ပျော်စရာမကောင်းတဲ့ မိသားစုဘဝမှာ ဂုဏ်သရေရှိအမျိုးသမီး တစ်ဦး အဖြစ်၊ ဝတ္တရားကျေပြွန်တဲ့ ဇနီးကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ် ဘဝကို ဖြတ်သန်းရပါတော့တယ်။
ဒီစာကို ဖတ်ပြီး အရင်ခေတ်အခါက အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဘဝကို စာနာမိသလို၊ စိတ်မကောင်းလည်း ဖြစ်ရပါတယ်။ ဘယ်လို မိသားစုအသိုင်းအဝိုင်းမှာပဲ မွေးဖွားလာသည်ဖြစ်စေ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ ဇနီးကောင်းတစ်ယောက်ဘဝထက် ပိုပြီး ဖြစ်လာခွင့်မရတာစိတ်မကောင်းစရာပါ။
ပညာတတ်၊ ငွေကြေးပြည့်စုံပြီး အသိုင်းအဝိုင်းကောင်းတဲ့ မိဘတွေတောင် သမီးအတွက် ကိုယ်ပိုင်ဘဝတစ်ခု တည်ထောင်ပေးဖို့ထက် သမီးကို တင့်တောင့်တင့်တယ် ထားပေးနိုင်မယ့် ခင်ပွန်းယောက်ျားကောင်းကိုပဲ ရှာပေးပြီး အဲဒီလူကိုပဲ ပညာတွေသင်ပေးကြတာပါ။ သမီးလုပ်သူကိုတော့ ဒီ ခင်ပွန်းကို အလုပ်အကျွေးပြုရင်း ဇနီးမယားကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်သွားဖို့ပဲ သင်ကြားပြသပေးတတ်ခဲ့ကြတာပါ။
ဒီလို အတွေးအခေါ် အယူအဆတွေ ဒီဘက်ခေတ်မှာ နည်းပါးသွားတာ ဝမ်းသာစရာပါပဲ။ ဒီနေ့ခေတ် မြန်မာပြည်မှာ မိဘတွေက သမီးတွေကို ပညာသင်ကြားခွင့်၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်တွေ ပေးထားကြပါပြီ။ အမျိုးသမီးတွေဟာလည်း ကဏ္ဍအသီးသီးမှာ ပညာရှင်တွေအဖြစ် အောင်မြင်စွာလုပ်ကိုင်နေကြပါပြီ။
Related Article >>> တစ်ခေတ်တစ်ခါက အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝအကြောင်း ရေးသားထားတဲ့ စာအုပ်နှစ်အုပ်
ဒါပေမဲ့လည်း မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အရည်အချင်းဆိုတာ ဇနီးမယားကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်းပဲလို့ ယူဆထားကြတဲ့ သူတွေလည်း မြန်မာပြည်မှာ အများကြီးကျန်နေပါသေးတယ်။ ပညာတတ်ဖြစ်တာတောင် အိမ်မှာဇနီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရပ်တည်နေကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေလည်း အများကြီးပေါ့။ ဒါက မကောင်းလို့လား လို့မေးရင်တော့ မကောင်းဘူးလို့လည်း မဆိုပါဘူး။ လူတိုင်းက ကိုယ့် ဘဝ ကို စိတ်ကြိုက်ဖြတ်သန်းခွင့်ရှိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ မိန်းကလေးဆိုတာ ဇနီးမယားကောင်းတစ်ယောက် ဘဝတင်သာ ဖြစ်ခွင့်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့်ဘဝကို လွပ်လပ်စွာရပ်တည်ပိုင်ခွင့်ရှိပြီး ကိုယ့်အိပ်မက်ကို စိတ်ကြိုက်ပုံဖော်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာ မိန်းကလေးတွေကို သိစေချင်တာပါ။
အိမ်ထောင်ပြုလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ လုပ်လက်စ အလုပ်တွေကနေ ထွက်ပြီး အိမ်မှာပဲ အိမ်မှုကိစ္စလုပ်၊ ကလေးထိန်းရင်း ဘဝကြီးကို ဖြတ်သန်းနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ ပျော်တယ်ဆိုရင် နေခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒီဘဝမှာ မပျော်တော့ဘူးဆိုရင် အရင်ကလိုပဲ ထွက်ပြီး အလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိပါသေးတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ဘဝကို ဘာအကြောင်းကြောင့်နဲ့မှ ပိတ်လှောင်ထားစရာ မလိုပါဘူးနော်…
တချို့တွေဆိုရင် ကိုယ့်မိဘ၊ အမျိုးသားရဲ့ မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကိုက အလုပ်ထွက်ဖို့ ဖိအားပေးကြတဲ့ ဒဏ်ကို မခံနိုင်ကြတာမို့ အချင်းချင်း ကြားမှာ စိတ်ကွက်ရတာတွေ၊ ဆက်ဆံရေး အဆင်မပြေဖြစ်ရတာတွေ အများကြီးပါ။ ကိုယ့်ဘဝကိုယ်ကျောင်းပါ။ ကိုယ့်အခြေအနေ ကိုယ်မြှင့်တင်ပါ။
တစ်ခါ ကိုယ့်အမျိုးသားက ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုပါစို့… ကလေးရှိသူတွေကလည်း ကလေးမျက်နှာငဲ့ပြီး သြော်.. ငါ့သားလေး ငါ့သမီးလေး မျက်နှာရှိသေးတယ်။ ဖတဆိုးလေး ဖြစ်ရှာမယ်၊ ကလေးမျက်နှာငယ်ရှာမယ်နဲ့ အရာရာကို ကြိတ်ခံ၊ မယားကောင်းကြီးဖြစ်အောင် ကိုယ့်မာနတွေ၊သိက္ခာတွေကို ချိုးနှိမ်လို့ ခေါင်းငုံ့နေရတဲ့ အဖြစ်တွေ အများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။ မလိုပါဘူး။ ကိုယ်တိုင် ကိုယ့်ပညာအရည်အချင်းနဲ့ ရပ်တည်နေနိုင်ရင် နောက်ထပ်လူတစ်ယောက်ကို ဘာအတွက် မှီခိုနေမှာလဲ? ကိုယ့်ကလေးကို ကိုယ့်အရည်အချင်းနဲ့ကိုယ် ပျိုးထောင်စွမ်းရှိနေရင် ဘယ်သူ့မျက်နှာမှလည်း ကြည့်နေဖို့ မလိုပါဘူးနော်… တစ်ခုလပ်ဖြစ်မှာစိုးလို့၊ ပတ်ဝန်းကျင်က ပြောမှာစိုးလို့… စိုးလို့ ပေါင်းများစွာကို ငဲ့ညှာမနေပါနဲ့။ ကိုယ့်ဘဝမှာ ကိုယ်သာ အရှင်ပါ။ ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်ကို ကိုယ်သာပုံဖော်နိုင်စွမ်းရှိတာပါ။ ကိုယ့်ဘဝက မှန်ကန်တဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်နေဖို့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က သန်မာနေဖို့ လိုပါတယ်။
ဆရာမကြည်အေး ရဲ့ မြနန္ဒာလို မိန်းကလေးတွေ ထပ်ပြီးမရှိပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းရင်း ………
တဈခတျေတဈခါက အမြိုးသမီးတှရေဲ့ဘဝကို မွနန်ဒာ နဲ့ ထငျဟပျစခေဲ့တာ ဆရာမ ကွညျအေးရဲ့ အနုပညာပါ
ဆရာမကွီး ကွညျအေးရေးဖူးတဲ့ “မောငျ ကိုကို နဲ့ မွနန်ဒာ” ဆိုတဲ့ စာအုပျကို ဖတျဖူးသူတှေ၊ မဖတျဖူးသူတှေ ရှိကွပါမယျ။ ဒီဆောငျးပါးက ဒီစာအုပျအကွောငျး အဓိက ပွောခငျြတာမဟုတျပါဘူး။ ဆရာမကွီးကွညျအေး ဖျောပွခဲ့တဲ့ တဈခတျေက အမြိုးသမီးတှရေဲ့ ဘဝအကွောငျးကိုပါ။
ဇာတျလမျး ရဲ့ အဓိက အမြိုးသမီးဖွဈတဲ့ မွနန်ဒာ ဟာ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ အထကျတနျးလှာအသိုငျးအဝိုငျးမှာ မှေးဖှားလာသူဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ မွနန်ဒာဟာ လုံလောကျတဲ့ ပညာသငျခှငျ့မရခဲ့ပါဘူး။
ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ မလိုအပျဘူးလို့ သူ့မိဘတှကေ ယူဆခဲ့ကွလို့ပါ။ မွနန်ဒာ ငယျစဉျကတညျးက ဆှမြေိုးနီးစပျတျောတဲ့ ကိုကို နဲ့ လကျထပျပေးဖို့ မွနန်ဒာရဲ့ အဖကေ ရှေးခယျြခဲ့ပါတယျ။ ရှေးခယျြခဲ့တဲ့အတိုငျး မွနန်ဒာရဲ့ ဖခငျက ကိုကို့ကို အင်ျဂလနျနိုငျငံမှာ ဆရာဝနျဖွဈသညျအထိ ပညာသငျဖို့ ထောကျပံ့ပေးခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ မွနန်ဒာ ကိုတော့ ပညာတတျတယျ ဆိုရုံတငျ အထကျတနျးကြောငျးအထိသာ ပညာသငျပေးဖို့ ရညျရှယျခဲ့ပါတယျ။ နောကျပိုငျး မွနန်ဒာက တောငျးဆိုလှနျးလို့သာ တက်ကသိုလျ တကျခှငျ့ပေးခဲ့တာပါ။
Related Article >>>> မသိမမီလိုကျတဲ့ခတျေက အမြိုးသမီးတှအေပျေါ ခှဲခွားထားခဲ့တဲ့ ဓလမြေ့ား
အခြိနျတနျတော့လညျး မွနန်ဒာကို ကိုကို နဲ့ လကျထပျစခေဲ့ပွီး မွနန်ဒာ ဇနီးကောငျးတဈယောကျဖွဈရပွနျပါတယျ။ ကိုကို အပွငျမှာ ခွရှေုပျတော့လညျး ကိုကို ဘာပဲဖွဈနနေေ မွနန်ဒာဟာ ဇနီးကောငျးတဈယောကျအနနေဲ့ ပွုစုယုယရမယျ ဆိုတဲ့ အသိကိုပဲ မွနန်ဒာရဲ့ မိဘတှကေ သှငျးပေးခဲ့ပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့ မွနန်ဒာဟာ ပြျောစရာမကောငျးတဲ့ မိသားစုဘဝမှာ ဂုဏျသရရှေိအမြိုးသမီး တဈဦး အဖွဈ၊ ဝတ်တရားကပြွှေနျတဲ့ ဇနီးကောငျးတဈယောကျအဖွဈ ဘဝကို ဖွတျသနျးရပါတော့တယျ။
ဒီစာကို ဖတျပွီး အရငျခတျေအခါက အမြိုးသမီးတှရေဲ့ ဘဝကို စာနာမိသလို၊ စိတျမကောငျးလညျး ဖွဈရပါတယျ။ ဘယျလို မိသားစုအသိုငျးအဝိုငျးမှာပဲ မှေးဖှားလာသညျဖွဈစေ မိနျးကလေးတဈယောကျဟာ ဇနီးကောငျးတဈယောကျဘဝထကျ ပိုပွီး ဖွဈလာခှငျ့မရတာစိတျမကောငျးစရာပါ။
ပညာတတျ၊ ငှကွေေးပွညျ့စုံပွီး အသိုငျးအဝိုငျးကောငျးတဲ့ မိဘတှတေောငျ သမီးအတှကျ ကိုယျပိုငျဘဝတဈခု တညျထောငျပေးဖို့ထကျ သမီးကို တငျ့တောငျ့တငျ့တယျ ထားပေးနိုငျမယျ့ ခငျပှနျးယောကျြားကောငျးကိုပဲ ရှာပေးပွီး အဲဒီလူကိုပဲ ပညာတှသေငျပေးကွတာပါ။ သမီးလုပျသူကိုတော့ ဒီ ခငျပှနျးကို အလုပျအကြှေးပွုရငျး ဇနီးမယားကောငျးတဈယောကျအဖွဈ ရပျတညျသှားဖို့ပဲ သငျကွားပွသပေးတတျခဲ့ကွတာပါ။
ဒီလို အတှေးအချေါ အယူအဆတှေ ဒီဘကျခတျေမှာ နညျးပါးသှားတာ ဝမျးသာစရာပါပဲ။ ဒီနခေ့တျေ မွနျမာပွညျမှာ မိဘတှကေ သမီးတှကေို ပညာသငျကွားခှငျ့၊ အလုပျလုပျကိုငျခှငျ့တှေ ပေးထားကွပါပွီ။ အမြိုးသမီးတှဟောလညျး ကဏ်ဍအသီးသီးမှာ ပညာရှငျတှအေဖွဈ အောငျမွငျစှာလုပျကိုငျနကွေပါပွီ။
Related Article >>> တဈခတျေတဈခါက အမြိုးသမီးတှရေဲ့ဘဝအကွောငျး ရေးသားထားတဲ့ စာအုပျနှဈအုပျ
ဒါပမေဲ့လညျး မိနျးကလေးတဈယောကျရဲ့ အရညျအခငျြးဆိုတာ ဇနီးမယားကောငျးတဈယောကျ ဖွဈခငျြးပဲလို့ ယူဆထားကွတဲ့ သူတှလေညျး မွနျမာပွညျမှာ အမြားကွီးကနျြနပေါသေးတယျ။ ပညာတတျဖွဈတာတောငျ အိမျမှာဇနီးတဈယောကျအနနေဲ့ ရပျတညျနကွေတဲ့ အမြိုးသမီးတှလေညျး အမြားကွီးပေါ့။ ဒါက မကောငျးလို့လား လို့မေးရငျတော့ မကောငျးဘူးလို့လညျး မဆိုပါဘူး။ လူတိုငျးက ကိုယျ့ ဘဝ ကို စိတျကွိုကျဖွတျသနျးခှငျ့ရှိပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ မိနျးကလေးဆိုတာ ဇနီးမယားကောငျးတဈယောကျ ဘဝတငျသာ ဖွဈခှငျ့ရှိတာမဟုတျပါဘူး။ မိနျးကလေးတဈယောကျအနနေဲ့ ကိုယျ့ဘဝကို လှပျလပျစှာရပျတညျပိုငျခှငျ့ရှိပွီး ကိုယျ့အိပျမကျကို စိတျကွိုကျပုံဖျောနိုငျခှငျ့ရှိတယျဆိုတာ မိနျးကလေးတှကေို သိစခေငျြတာပါ။
အိမျထောငျပွုလိုကျပွီဆိုတာနဲ့ လုပျလကျစ အလုပျတှကေနေ ထှကျပွီး အိမျမှာပဲ အိမျမှုကိစ်စလုပျ၊ ကလေးထိနျးရငျး ဘဝကွီးကို ဖွတျသနျးနရေတဲ့အခွအေနမြေိုးမှာ ပြျောတယျဆိုရငျ နခှေငျ့ရှိပါတယျ။ ဒီဘဝမှာ မပြျောတော့ဘူးဆိုရငျ အရငျကလိုပဲ ထှကျပွီး အလုပျလုပျခှငျ့ရှိပါသေးတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ ဘဝကို ဘာအကွောငျးကွောငျ့နဲ့မှ ပိတျလှောငျထားစရာ မလိုပါဘူးနျော…
တခြို့တှဆေိုရငျ ကိုယျ့မိဘ၊ အမြိုးသားရဲ့ မိဘတှကေိုယျတိုငျကိုက အလုပျထှကျဖို့ ဖိအားပေးကွတဲ့ ဒဏျကို မခံနိုငျကွတာမို့ အခငျြးခငျြး ကွားမှာ စိတျကှကျရတာတှေ၊ ဆကျဆံရေး အဆငျမပွဖွေဈရတာတှေ အမြားကွီးပါ။ ကိုယျ့ဘဝကိုယျကြောငျးပါ။ ကိုယျ့အခွအေနေ ကိုယျမွှငျ့တငျပါ။
တဈခါ ကိုယျ့အမြိုးသားက ဖောကျပွနျတယျဆိုပါစို့… ကလေးရှိသူတှကေလညျး ကလေးမကျြနှာငဲ့ပွီး သွျော.. ငါ့သားလေး ငါ့သမီးလေး မကျြနှာရှိသေးတယျ။ ဖတဆိုးလေး ဖွဈရှာမယျ၊ ကလေးမကျြနှာငယျရှာမယျနဲ့ အရာရာကို ကွိတျခံ၊ မယားကောငျးကွီးဖွဈအောငျ ကိုယျ့မာနတှေ၊သိက်ခာတှကေို ခြိုးနှိမျလို့ ခေါငျးငုံ့နရေတဲ့ အဖွဈတှေ အမြားကွီးရှိနပေါသေးတယျ။ မလိုပါဘူး။ ကိုယျတိုငျ ကိုယျ့ပညာအရညျအခငျြးနဲ့ ရပျတညျနနေိုငျရငျ နောကျထပျလူတဈယောကျကို ဘာအတှကျ မှီခိုနမှောလဲ? ကိုယျ့ကလေးကို ကိုယျ့အရညျအခငျြးနဲ့ကိုယျ ပြိုးထောငျစှမျးရှိနရေငျ ဘယျသူ့မကျြနှာမှလညျး ကွညျ့နဖေို့ မလိုပါဘူးနျော… တဈခုလပျဖွဈမှာစိုးလို့၊ ပတျဝနျးကငျြက ပွောမှာစိုးလို့… စိုးလို့ ပေါငျးမြားစှာကို ငဲ့ညှာမနပေါနဲ့။ ကိုယျ့ဘဝမှာ ကိုယျသာ အရှငျပါ။ ကိုယျ့ရညျမှနျးခကျြကို ကိုယျသာပုံဖျောနိုငျစှမျးရှိတာပါ။ ကိုယျ့ဘဝက မှနျကနျတဲ့ လမျးကွောငျးပျေါ ရောကျနဖေို့ ကိုယျကိုယျတိုငျက သနျမာနဖေို့ လိုပါတယျ။
ဆရာမကွညျအေး ရဲ့ မွနန်ဒာလို မိနျးကလေးတှေ ထပျပွီးမရှိပါစနေဲ့လို့ ဆုတောငျးရငျး ………
Tags: Books, gender equality, her club, Her Life, Kyi Aye, Motivation
Sugar Cane December 21, 2018